သက်တန့်ချို: အရေပြားရောဂါအတွက် အခက်မတွေ့စေဖို့
အရေပြားရောဂါအတွက် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗဟုသုတများကို ကဗျာများအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေ မယ့် ဒီကဗျာလေးတွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဗျာများ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာမ ဒေါက်တာ မြတ်စန္ဒာကျော်ရဲ့ အရေပြားရောဂါဆိုင်ရာကဗျာများပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆမ မွမ်းမံသင်တန်း တက်တုန်းက ရရှိခဲ့တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးထဲက ကဗျာများပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိမိတို့ရဲ့ ကလေးငယ်များနှင့် မသိသေး သူများကို ကဗျာလေးတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အရေပြားရောဂါအတွက် အခက်မတွေ့ကြပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အနီဖု အနီစက် ကျောမျက်နှာ
ထုံး သနပ်ခါး မိတ်ကပ်ဖုံး ပိုကြီးလာ
အမည်းစက် အနာရွတ် ပြည့်ကျန်ရစ်
Skinar ငှက်နှစ်ကောင် ပိုဆိုးနိုင်
စနစ်တကျ ကုမှနိုင် ။
Auto Immune တဲ့
Pred : Dexa ရှောင်ရမည်
အတူနေ တစ်မိသား ၊ အားလုံးဝဲကူးသွား ။
" ဘက်နိုဗိတ်နဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်" ( ယားနာပျောက်ဆေး)
ဆေးမြီးတိုနဲ့ ပျောက်သယောင် တကယ်ကျတော့မလွယ်ပေါင်
ကုတ်လို့ကောင်းလေပိုကုတ်လေ လက်သည်းကူးတာ ဗွေးဆိုးလေ
ဒက်ကုတ်ရင်လည်း လက်သည်းပျက် ဆေးကုငွေကုန်အလုပ်ပျက်
သဲဝဲ ရေ၀ဲ မကုထား ခြေသည်းတွေလည်း ပိုးတွေစား
ဓါးမသန့်ရင် ကိုရင်များ သင်တုန်းဓါးနဲ့ ပွေးတွေပွား
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းရိတ်ရင် တစ်ခါသုံးကို သုံးစေချင်
ငှက်နှစ်ကောင် ၊ ဘက်နိုဗိတ်
မထိတထိ ဆေးကုရင် တစ်ကယ်ကုတော့ မပျောက်ချင်
စနစ်တကျ ကုမှသာ ပွေးဒက် ရောဂါပျောက်တော့မှာ
သန့်သန့်ရှင်းရှင်း နေပါလား ပြန်ဖြစ်တာကို ကာကွယ်ထား ။
Credit : ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော်
Angel Shaper May 13, 2010 at 1:07 PM
မောင်ဘကြိုင် May 13, 2010 at 7:48 PM
kiki May 13, 2010 at 10:51 PM
ကြည့်ရင်းနဲ့ တောင် ယားလာတယ် ..( အသည်းယား တာ ပါ ) ..
Seborrheic dermatitis အကြောင်း လေး ရော .. စပ်ထားတာ ရှိသေးလား .. Psoriasis နဲ့သိပ် မခွဲခြားတတ် လို့ပါ ။
အရင်ကတော့ မြွေ နှစ်ကောင် ပွေးဝဲယားနာ ပျောက်ဆေး ဆိုတာ ကြားဖူးတယ် ..ခုတော့ ငှက်နှစ်ကောင် ဆေးပါ ပေါ်နေတာ ကိုး ..
မှတ်သားသွားပါတယ် သက်တန့် ရေ ..
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ May 14, 2010 at 8:56 AM
အသည်းရော အူရောယားတယ်... ချိတ်ညစ်ချာကြီး....
မီးမီး ခဲတံ May 16, 2010 at 2:00 PM
ကိုကြီးသက်ရေ ဗောက်ရောဂါ အကြောင်းလေး ပြောပြ ပါဦးရှင်..
maylay May 18, 2010 at 8:16 PM
မောင်လေး ဟဲဟဲ။။ မေးဦးမလို့ .... ဆပ်ပြာစားလို့ နဂိုအရေပြားတောင် ပြန်အသစ်မဖြစ်တော့တဲ့ လက်ချောင်းကြားက ဝဲကိုရော ဘယ်လိုဆေးနဲ့ ကုရမလဲ။။။ အစ်မကို ပြောပြပါဦးနော်။
maylay May 18, 2010 at 8:17 PM
ဆေးဝယ်ရတာ။။ ဆေးဝယ်ပေးရတာ တော်တော်လန့်သွားလို့
mee mee August 14, 2010 at 3:58 PM
ကိုကြီးသက်တန့် ရေ ... ဗောက်ရောဂါနဲ့ အူအတက် ရောင်ခြင်း/ ပေါက်ခြင်း အကြောင်းကိုလဲ သိချင်ပါသေးတယ် .. ကူညီပါဦးနော်..
nlay February 25, 2012 at 11:16 AM
ဂျီပီဘ၀ နဲ့ ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀လေး
တန`င်္လာကိုကို June 25, 2012 at 5:59 PM
Can you post about "Keloid" ? I want to know about it.
zarni zar August 31, 2013 at 10:17 AM
ပီးခဲ့တဲ့လက မြိတ်မှာ မိုးကလည်းကောင်း ၊ မီးကလည်းပျက်တော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ မီးပူမတိုက်ပဲ တပတ် ဆယ်ရက်လောက် ၀တ်လိုက်ရတယ်။
မိုးကလည်း မပြတ်ရွာနေတော့ လျော်ထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေက နေပူမရပဲ အရိပ်ထဲမှာ စိုထိုင်းထိုင်းနဲ့ ခြောက်တဲ့အ၀တ်အစားတွေဆိုတော့ မှို န့ံ တွေသင်းနေပါတယ် ဆရာ။
ပွေးဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ မီးကလည်း တောက်လျောက် ပျက်နေခဲ့တော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို မီးပူမတိုက်ရပဲ မှိုန့ံသင်းသင်းနဲ့ တပတ် ဆယ်ရက်လောက် ၀တ်ခဲ့ရာကနေ ပေါင်ခြံမှာ ပွေးတွေထွက်လာပါတယ် ဆရာ။
ပွေးဆေးတော်တော်များများ လိမ်းပေမယ့် မသက်သာလို့ဆရာ့ ဆီ ဆေးညွှန်းတောင်းခံရတာပါ။
အမြန်ဆုံးပျောက်မဲ့ အကောင်းဆုံးဆေးကို ညွှန်ပြပေးပါဆရာ။
ကျနော် ဆေးညွှန်း စောင့်ယူပါ့မယ်။
ဆစ်ခရွန် လိမ်းကြည့်ပါလား ကျွန်တော် ဖြစ်တုန်းက2ရက်လိမ်းရတာ ပျောက်တယ်
ိုဇာနီဇာလိုပဲ ကျွန်​​တော်​လည်း​ပေါင်​မှာ အဲဒါ​ဆေးညွှန်း​လေး​ပေးပါဦး